Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny karazana exotic sy endemika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny karazana exotic sy endemika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / Inona no tsy itovizan'ny karazan-javamaniry hafakely sy endemika
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny karazana karazana exotic sy endemika dia ny karazana exotic dia karazana an'ny faritra hafa fa ampidirina amin'ny faritra hafa, raha ny endemika endemika dia ny karazan-tany izay ahitana azy manokana .
Amin'ny fanasokajiana biolojika, ny karazana dia vondrona zavamananaina misy zavamananaina mifandraika izay manana toetra mampiavaka azy ary afaka miteraka. Ity foto-kevitra biolojika an'ny karazana ity dia matetika ampiasaina amin'ny biolojia sy ny saha mifandraika amin'izany. Na izany aza, ny fiheverana ny karazana tontolo iainana dia mamaritra ny karazany ho vondrona zavamananaina noforonin'ireo loharano iankinan'izy ireo. Ireo karazana ireo dia manampy amin'ny famaritana tontolo tontolo iainana . Ny karazana exotic sy endemika dia karazany roa manan-danja indrindra izay miaina anaty tontolo iainana.
2. Inona no atao hoe karazana hafakely
3. Inona no karazana endemita
4. Ireo fitoviana - Karazan-javamaniry hafahafa sy fiaviana
5. Karazana exotic vs Endemika amin'ny endrika Tabular
6. Famintinana - Karazan-jaza exotic vs Endemika
Inona no atao hoe karazana hafakely?
Ny karazany hafakely dia karazana an'ny faritra hafa saingy ampidirina amin'ny faritra hafa. Ireo karazana ireo dia miaina ivelan'ny faritra misy azy avy. Azo inoana fa tonga tany amin'ny faritra vahiny ireo karazana ireo noho ny fiasan'ny fanahy iniana na fanahy iniana tsy nahy. Raha ny mahazatra, ny karazana tsy tompon-tany dia misy fiatraikany samihafa amin'ny tontolo iainana. Raha lasa miorina sy miparitaka mihoatra ny toerana fampidirana ireo karazana nampidirina dia heverina ho voajanahary.
Sary 01: Karazan-javamaniry hafahafa
Ny fampidirana karazana karazan'olombelona dia hafa tanteraka amin'ny fanjanahana biolojika satria ny fanjanahana biolojika dia vokatry ny zava-boahary toy ny tafiotra sy ny rafting. Ny fiatraikan'ny karazan-java-maniry nampidirina amina tontolo iainana eo an-toerana dia miovaova be. Ny sasany misy fiatraikany ratsy lehibe. Ireo koa dia antsoina hoe karazana manafika. Ireo karazana hafa dia tsy misy fiatraikany ratsy na misy akony kely fotsiny. Ankoatr'izay, amin'ny fikarohana siantifika, ny karazana sasany dia nampidirina iraisam-pirenena hiadiana amin'ny bibikely. Fantatra amin'ny hoe biocontrols izy ireo. Mety heverina ho mahasoa izy ireo amin'ny alàlan'ny fanoloana fanafody famonoana bibikely toy ny amin'ny fambolena. Ankoatr'izay, ny vokatry ny karazany hafakely amin'ny tontolo voajanahary dia nahazo fanaraha-maso betsaka avy amin'ireo mpahay siansa, governemanta, tantsaha ary mpandray anjara hafa nandritra ny taona maro.
Inona ny karazana endemita?
Ny karazana endemika dia ny karazam-biby izay an'ny faritra iray izay ahitana azy manokana. Ireo karazana ireo dia ireo izay tsy hita afa-tsy amin'ny faritra iray ihany ary amin'ny toerana hafa eto amin'izao tontolo izao. Ohatra, ny kangaroo dia miteraka fiandohana any Aostralia. Nefa rehefa misy mahita ny kangaroo any ivelan'i Aostralia, dia noho ny fampidiran-dresaka avy amin'ny olombelona.
Sary 02: Karazan-karazany endemika
Misy marsupial hafa izay miandany amin'i Aostralia sy ireo nosy manodidina azy. Ny biby iray toy izany dia ilay tigra Tasmanianina izay nateraky ny tany Aostralia, Tasmania, ary Nouvelle-Guinea. Ankehitriny, dia marsupial karnivora lany tamingana. Ankoatr'izay, ny siramamy any Cape dia hita any atsimo andrefan'i Afrika Atsimo ihany. Noho izany, miteraka fahavoazana ho an'io faritra manokana io. Raha zavamaniry, Cyctisus aeolicus dia endemika amin'ny zavamaniry italiana. Ny voambolana hafa tsy fahita firy amin'ny karazana endemika dia "precinctive". Izy io dia mihatra amin'ny karazana izay voafetra amin'ny faritra jeografika voafaritra.
Inona avy ireo fitoviana misy amin'ny karazana exotic sy endemika?
Ny karazana exotic sy endemika dia karazana karazany roa manan-danja miaina anaty tontolo iainana.
Ireo karazana roa ireo dia nofaritana tamin'ny fiheverana ny karazana tontolo iainana.
Indraindray ireo karazan-javamaniry ireo dia mahasoa amin'ny tontolo iainana.
Ireo karazana roa ireo dia samy manana fahaizana miteraka sy miely.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny karazana exotic sy endemika?
Ny karazana exotic dia karazana an'ny faritra sasany hafa saingy ampidirina any amin'ny faritra hafa any ivelany ary ireo karazana endemika dia karazana izay an'ny faritra iray izay ahitana azy manokana. Ka io no mampiavaka azy lehibe indrindra amin'ny karazany exotic sy endemika. Ankoatr'izay, ny karazana exotic dia mety hisy fiatraikany ratsy lehibe amin'ny tontolo iainana eo an-toerana, raha ny karazana endemika kosa dia tsy misy fiatraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny karazany exotic sy endemika amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Karazan-jaza exotic vs Endemika
Ao amin'ny foto-kevitry ny karazana ekolojika, ny karazany dia karazany roa indrindra: ny karazany ivelany sy ny endemika. Ireo karazana hafakely dia ireo izay an'ny faritra hafa nefa ampiarahina amin'ny faritra hafa. Ireo karazana endemika dia ireo izay an'ny faritra iray izay ahitana azy manokana. Araka izany, io no mampiavaka ny karazam-biby exotic sy endemika.
1. “ Karazan-javamaniry hafahafa .” Topimaso iray | Lohahevitra momba ny siansa.
2. Krosofsky, Andrew. " Fa maninona no ilaina ny karazana karazana endemika amin'ny tontolo iainana? ”Raharaha maintso, raharaha maintso, 17 nov. 2020.
1. " Làlana lehibe sy fiavian'ireto karazana fanafihana bibikely any amin'ny tontolo anaty ranomasina " Nosoratan'i GRID-Arendal (CC BY-NC-SA 2.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. “ Kangaroo Australia 01 11 2008 - retouch ” Nosoratan'i Mark Wagner, miorina amin'ny sary nataon'ny Mpampiasa: Lilly M - Mpampiasa: Lilly M (CC BY-SA 3.0) avy amin'ny Wikimedia Commons
Fahasamihafana eo amin'ny Cactus Krismasy sy Cactus Thanksgiving Fahasamihafana eo amin'ny Apomixis sy Parthenogenesis Fahasamihafana eo Anisogamy Isogamy sy Oogamy Fahasamihafana eo amin'ny Monogamous sy Non Monogamous Fahasamihafana eo amin'ny Protoplast sy Heterokaryon
Fahasamihafana eo amin'ny Canon 5D Mark II sy 7D
Fahasamihafana eo amin'ny mololoola Linear sy Nonlinear
Fahasamihafana eo amin'ny firaka sy ny fitambarana
Fahasamihafana eo amin'ny taolana matevina sy Canclous
Fahasamihafana eo amin'ny fonja federaly sy fanjakana